मुद्दतिमा आठ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुग्दा बचत खातामा जम्मा दुई प्रतिशत, यस्तो भेदभाव किन ?
काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यतिबेला निक्षेपमा ब्याजदरको पारो तातेको छ ।
बैंकमा तरलता कम हुँदै जाँदा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर आठ प्रतिशतसम्म पुर्याइसके । यहीक्रम जारी रहे केही समयपछि ब्याजदर १० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान कतिपयले गरिेहेका छन् ।
बैंकले मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर आठ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घोषणा गरिरहे पनि अहिले पनि बचत खाताको ब्याजदर भने अहिले पनि निकै दयनीय अवस्थामा छ । बचत खातामा बैंकहरूको ब्याजदर अहिले पनि औसतमा दुई प्रतिशतमा सीमित छ ।
बैंकको बचत र मुद्दति खातामा ब्याजदर अन्तर हेर्यो भने पाँच प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ । बचमा एक–दुई प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिने बैंकले मद्दति खातामा आठ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पाइने प्रचार गरिरहेका छन् ।
आखिर निक्षेपकर्तामाझ किन यस्तो भेदभाव ? सामान्यतयः बचत खातामा पैसा जम्मा गर्नेमा मध्यम र निम्नमध्यमवर्गीयहरूको नै वर्चस्व बढी हुन्छ ।
अनि, मुद्दतिमा अलि हुनेखाने वर्ग, जसलाई निश्चित समयसम्म त्यस्तो रकम झिकेर चलाउनुपर्ने बाध्यता पर्दैन, उनीहरू धेरै हुन्छन् ।
निश्चय पनि मुद्दति खातामा बचतमा भन्दा बढी ब्याजदर पाइन्छ, यो विश्वव्यापी प्रचलन पनि हो । तर दुई खाताबीच हुने ब्याजदर अन्तर भने हामी कहाँ निकै बढी छ । अर्थविद् र विश्लेषकहरू कुनै पनि हालतमा यस्तो अन्तर अन्तः नहुने बताउँछन् ।
मुद्दति र बचत खाताबीच दिइने ब्याजदरमा किन यतिधेरै अन्तर ? यो प्रश्नमा बैंकरहरूको सोझो जवाफ छ, मुद्दति खातामा राखिएको रकम निश्चित अवधिसम्म निक्षेपकर्ताले झिक्न नपाउने भएकाले लगानी गर्न सजिलो हुन्छ । परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि मुद्दति निक्षेपलाई आधार बनाउन सकिने बैंकरहरू बताउँछन् ।
यसमा बैंकलाई कति पैसा कति अवधिसम्म परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा बैंकहरूले दिने जवाफ ठिकै लागे पनि व्यवहारिकरूपमा निकै गलत अनि अन्यायपूर्ण छ ।
अर्थशास्त्री तथा विश्लेषकहरू बचत र मुद्दति खाताबीच ब्याजदर अन्तर दुई प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्छन् । हामीकहाँ पाँच प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर देखियो ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण बचतकर्ताप्रति सरासर अन्याय गरेको ठहर्छ । मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर बढ्दै जाँदा यो अन्तर अझै फराकिलो हुने स्पष्ट संकेत देखिंदैछ ।
पूर्वबैंकरसमेत रहेका विश्लेषक अनलराज भट्टराई बैंकहरूले अहिले अल्पकालीन अवधिका लागि मात्र मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर बढाएकाले बचत खातामा दिइने ब्याजदरमा अन्तर बढी देखिएको बताउँछन् ।
‘वास्तविकरूपमा दुई खाताबीच दिइने ब्याजदरमा अन्तर धेरै हुन नहुने भए पनि यतिबेला बैंकहरूले तरलता अभाव कुन तहसम्म पुग्ने हो भन्ने निश्चित नहुँदा मुद्दतिमा थोरै समयका लागिमात्र निक्षेप स्विकारेका छन्,’ उनले भने, ‘बचतमा ब्याजदर बढाइहाल्न बैंकहरूले आँट गरिहालेको देखिंदैन’ ।
पहिलो चरणमा मुद्दतिमा ब्याजदर बढेकाले दोस्रो चरणदेखि बचतमा पनि बढ्न सुरु हुने उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको सीमा ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ता एकहदसम्म उत्साही भएका थिए । अब सर्वसाधारणले पनि निक्षेपमा आकर्षक ब्याजदर पाउन सक्छन् भनेर ।
तर बैंकहरूले आकर्षक प्रस्ताव त ल्याए तर त्यो फेरि पनि मुद्दति निक्षेपमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । किन भने अधिकांश सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बचत खाता नै हुन्छ । लामो समयसम्म निश्चित रकम होल्ड गर्न नसक्नेले मुद्दति निक्षेपमा पैसा राख्न सक्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्यतय ः पाँच प्रतिशतको स्प्रेड दर कायम गरेर कर्जा र निक्षेपमा ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । तर, मुद्दति, बचतसहितका खातामा दिइने ब्याजदर कति हुने वा अन्तर कतिप्रतिशतसम्म हुन पाउने भनेर राष्ट्र बैंकले खासै नियमन गरेको पाइँंदैन् ।
बैंकलाई यसमा नियामकले स्वविवेक अधिकार दिएको देखिन्छ । एक प्रकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका स्वनियमनमा बस्नुपर्ने क्षेत्र हुन् ।
हरेक कुरामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । नियामकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्यो, जुन गलत हो भनेर यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू भनिरहेका छन् ।
तर, बैंकहरूले निक्षेप खातामा दिइने ब्याज अन्तरमा गरेको भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्न फेरि नियामकले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आउनु त्यति राम्रो अवस्था नहुन सक्छ ।
नेकोले १९ वर्षदेखि बाँकी रहेको नगद लाभांश लिन बोलायो, चैत ८ गतेसम्म नलिए के हुन्छ ?
प्रभु बैंकको ४०% हकप्रद भर्न छुट्ला है, अब २ दिनमात्र समय बाँकी
सिभिल बैंकले अब बचत खातामै १०% ब्याज दिने, खाता खोल्नेलाई यस्ता छन् सुविधा
नबिलका दुवै म्युचुअल फन्डको प्रतिइकाई खुद सम्पति मूल्य घट्यो, सेयर लगानीमा पनि गिरावट
एनआइसी एसिया, देवः र गोर्खाज फाइनान्सले पनि सीआरएन नम्बर लिन बोलाए
सिद्धार्थ बैंकको १४% बोनस पाउन कहिलेसम्म बन्ने सेयरधनी ? चैत ४ मा एजीएम